Fiangonana Tynika, Fiangonan'i Maria Virjiny eo anoloan'ny Tyn - Prague
Eoropa Repoblika Tseky Prague
Adiresy: Staroměstské náměstí, Praha 1, Praha, Repoblika Tseky
Fotoana fiasana: isan'andro, manomboka amin'ny 10:00 hatramin'ny 17:00
Ny hatsaran-tarehin'ny trano fandraisam-bahiny, tafo-kodiarana mena, jiron'ny gazy ary ny atmosfera miavaka. Tsy sarotra ny maminavina fa ity no renivohitry Repoblika Tseky . Iray amin'ireo atleta malaza indrindra any Prague ny Fiangonana Tyn, sary iray izay heverina ho toetra manan-danja amin'ny fitsidihana fizahantany any amin'ireny toerana ireny.
Inona no mahaliana ny mpizaha tany?
Fiangonana Tynkely, Fiangonan'i Maria Virjiny taloha talohan'ny Tyn - trano tena mendri-piderana any Prague . Ireo bala mainty misy bolongana volamena dia toy ny satroboninahitra mpanjaka eo an-tokotanin'ny rindrina mavo amin'ny trano hafa. Io tempoly lehibe sy majestic io no maharesy ny heviny.
Ny fanorenana ny fiangonana dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XIV, saingy tsy vita izany hatramin'ny 1511. Vetivety teo, nahazo ny toeran'ny foibe ara-panahy tao Old City izy . Ny tempoly dia miorina eo amin'ny foibe ara-tantara, eo amin'ny kianja Old Town .
Ny tranobe dia natsangana tamin'ny fomba barok, mitazona ny fijerin'ny mpandalo, miaraka amin'ny hatsaran-tarehy gothic. Ao amin'ny endrika ivelany, ny singa ao amin'ny barock sy ny vanim-potoana Baroque taloha koa dia fantatra. Ireo tilikambo anankiroa dia 80 metatra ambony, mba hahafahanao mijery azy avy any amin'ny toerana rehetra ao afovoan-tanànan'i Prague. Mahaliana fa tsy mifanipaka izy ireo: voalohany, natsangana tamin'ny fotoana samihafa izy ireo, ary faharoa, ny endri-javatra toy izany dia manana ny rafitra gôtika.
Tyn Church ao anatiny
Ny fanorenana trano anatiny dia mifanaraka tsara amin'ny ivelany. Mandritra izany fotoana izany, mandalo ireo vavahady matevin'ny Fiangonan'i Mary Virjiny alohan'ny Tyn, fantatrao fa ny fanolanana dia tsy zavatra izay hampiakatra ny fahatsapana hafanam-po. Raha ny marina, ireo zava-tsarobidy hita ao amin'ny mpizaha tany dia:
19 dia noravahana volamena aman'ampinga betsaka;
14 sary hosodoko maro nataon'ny artista F. Tchermak;
fivarotana amin'ny fomba Gothique;
seza vato ao amin'ny fomba Gothique, ny famokarana azy dia mianjera amin'ny taonjato faha-15;
endri-tsoratra kely amin'ny endrika 12 apostoly, izay efa enin-taona mahery ny taonany;
sary hosodoko nataon'i K. Shkrety "Fiakaran'i Maria Virjiny" sy "Trinite", manondro ny alitaran'ny lohataona;
vato vita amin'ny 1493 nataon'i M. Reisek;
Fresco miaraka amin'i Md Jerome tamin'ny taonjato faha-16;
Orana tranainy, noforonin'ny Mund tamin'ny 1673.
Ankoatra izany, misy fasana enina ambinifolo ao amin'ny fiangonana. Ny toetra mampiavaka azy dia hoe olona efa fantatra sy solontenan'ireo kilasy ambany.
Ahoana no ahatongavana any amin'ny Tyn Church?
Afaka miditra eto ianao amin'ny alàlan'ny bus 207 mankany amin'ny toeram-piambenana Náměstí Republiky, na amin'ny tramba No. 2, 17, 18, 93 mankany amin'ny Staroměstská station.
Fiangonan'i Md John of Nepomuc
Akanjo maoderina any am-pianarana
Prokinetika amin'ny taranaka vaovao
Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny John Travolta dia mitaky ny mason-dehilahy sy ny foibe eo am-baravarankely
Ny pigmented spots eo amin'ny handrina - ny antony
Ahoana ny fisafidianana ny zaridaina elektrika?
Sakafo ateraky ny aty
Ny tsy fahampian-tsakafo
Jeans miaraka amin'ny satroka
Amlodipine - voka-tsoa hafa
Atesia amin'ny ompona amin'ny zaza
Fanafody Japoney avy amin'ny ketrona taorian'ny 40 taona
Ny maso manidina Lecrolin
Macaroni miaraka amin'ny kalsioma - recipe
Ahoana ny fomba hanaovana ny baranao?
Ahoana marina ny mahandro khinkali?
Ny sarimihetsika vaovao Jolie sy Pitt dia maminany ny tsy fahombiazany
Nahoana no ilaina ny sesame?
Fihetseham-po ho an'ny vehivavy aorian'ny 50 taona
Serotoninina amin'ny sakafo
Ahoana ny fomba hanamboarana turkey iray amin'ny famokarana?